Asam-panjakana :: Manokatra birao manokana fandraisana fitarainana mihitsy ny Filoham-pirenena • AoRaha
Asam-panjakana Manokatra birao manokana fandraisana fitarainana mihitsy ny Filoham-pirenena
«Tsy tokony hahatsiaro ho irery intsony ny vahoaka ». Io fehezan-teny io no teny filamatra noentin’ny Filoha Rajoelina Andry sy ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta hamaritana ny fomba hoentin’izy ireo mitantana ny firenena manomboka izao.
Nivoaka tao amin’ny Filankevitra, afak’omaly, ny fametrahana ny birao manokana eo anivon’ny Fiadidiana Ny Repoblika handraisana an’ireo fitarainana avy amin’ireo olom-pirenena mikasika an’ireo mety ho fanamparam-pahefana na fanararaotam-pahefana na fandikan-dalàna… amin’ny asa sy fitantanan-draharaham-panjakana. Azon’ireo olom-pirenena atao ny manatitra ny fitarainana eny amin’ny lapan’Ambohitsorohitra momba an’ireo mety ho fihoaram-pefy ataona manampahefana sy gaboraraka amin’ireny biraom-panjakana ireny.
« Misy birao manokana hisahana izany ary efa am-perinasa ireo olona mandray an’ireo fitarainana ireo. Ny tanjona dia ny mba tsy hisian’ny hantsana intsony manasaraka ny mpitondra sy ny vahoaka », hoy ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina, Rakotondrazafy Lalatiana, izay sady mpitondra tenin’ ny governemanta, omaly.
Araka ny fanampim-panazavana noentiny dia hisy ny fanadihadiana manokana mikasika ireo fitairanana voarain’ny Fiadidiana ny Repoblika. « Aorian’izany dia hanara- maso an’ireo sampan- draharam-panjakana na minisitera voakasiky ny raharaha ny Fiadidiana ny Repoblika. Azo atao ihany koa ny mampiakatra ny raharaha eny anivon’ny Fitsarana raha toa ka voaporofo ny mampitombina azy », hoy hatrany ramatoa minisitra. Na izany aza tsy alefa an-taratasy na amin’ny alalan’ny mailaka ny fitarainana fa tsy maintsy aterin’ilay olona mitaraina eny Ambohi- tsorohitra. Voalaza mantsy fa tokony hisy ny fanadihadiana atao amin’ilay olona manatitra ny fitarainana, mba hisorohana amin’ny mety ho fanasoketana na fanaovana tondro molotra fotsiny ihany. Hisy ihany koa ny fiarovana ny tsiambara- telon’ireo olona mametraka fitarainana.
Tsy hiray tsikombakomba
Araka ny fantatra dia nisy ny fivoriana manokana teo amin’ny Filoha Rajoelina Andry sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky teny Iavoloha, ny faran’ny herinandro lasa teo, izay nanome toromarika azy ireo « mba ho fitaratra sy hanome ohatra tsara eo amin’ny fitsipi-pitondran-tena tokony hananana amin’ny andraikitra sahaniny ». Fantatra fa efa nanao karazana fampitandremana azy ireo mba tsy hihoa-pefy na hanararao-pahefana mihitsy Rajoelina Andry, ary tsy hiaro an’ireo izay minia mandika ny toromarika nomeny.
Ankotra izay, dia isan’ny niadian-kevitra sy nandraisana fepetra nandritra ny Filankevitry ny minisitra teny Iavoloha ny momba ny fiahiana ny fandriampahalemana. Notapahina tamin’ity fivoriana ity, ohatra, ny fanaparitahana an’ireo mpitandro filaminana amin’ireo toerana samihafa eto an-drenivohitra. Teboka hafa iray lehibe ny momba ny ady amin’ ny asan-dahalo sy ny asan-jiolahy. Fantatra fa nisy ny fanafarana angidimby miisa dimy hampitaovana an’ireo mpitandro filaminana hiadiana amin’io asan-dahalo izay ho tonga tsy ho ela eto Madagasikara. Toy izany koa ny fampitaovana an’ireo mpitandro filaminana satria tamin’ny taona 1975 i Madagasikara no nividy fitaovam-piadiana farany.
Ady amin’ny kolikoly aty Afrika :: Lasa mpikambana ao anatin’ny Komity fakan-kevitra ny tale jeneralin’ny Bianco